Ilhaan Cumar maxay kaga jawaabtay tallaabada Israa’iil? | Xaysimo
Home War Ilhaan Cumar maxay kaga jawaabtay tallaabada Israa’iil?
Ilhaan Cumar maxay kaga jawaabtay tallaabada Israa’iil?
Labadan gabdhood ee ka wada tirsan aqalka Congareska ayaa taageeray tallaabo cunaqabateyn lagu saarayo Israa’iil balse sharciga Israa’iil ayaa ogolanayaa in tageerayasha ololahaas in laga mamnuuci karo inay booqasho ku tegi karaan Israa’iil.
Madaxweyne Trump ayaa horraan ku baaqay in labadan xildhibaan laga mamnuuco inay booqdaan Israa’iil isla markaasna ay neceb yihiin Israa’iil iyo dadka Yuhuudda.
Ilhaan Cumar waxay ku tilmaantay tallaabada Israa’iil “Inay ku tumaneyso mabaadii’da dimuqraadiyadda, waana jawaab laga naxo in saraakiil ka tirsan dowladda in laga mamnuuco inay booqasho ku tegaan dal saaxib la ah”
Trump waxaa uu sheegay in khalad weyn ay tahay waa haddii Ilhaan Cumar iyo Rashid Taib loo ogolaado inay booqdaan Israa’iil.
Ilhaan Cumar iyo Rashida Dhaalib waxay labaduba ay ka wada taageersanyihiin qadiyadda reer Falastiin, waxaa ay kasoo horjeedaan Israa’iil balse waxay beeniyeen inay neceb yihiin dadka Yuhuudda.
Sharciga Israa’iil waxaa uu dhigaya in dal ku-galka aanan la siin karin qof kasta oo shisheeye ah oo wado olole looga soo horjeedo Israa’iil ha ahaato mid dhaqaale, dhaqan ama waxbarasho.
Waxay qorsheynayeen inay booqdaan Israa’iil, sidoo kalena ay la kulmaan ururada u doodo Falastiin.